साप्ताहिक संवाददाता , माघ १०, २०७६
चलचित्रमा समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार, तस्करी, लागू औषध कारोबार, चेलीबेटी बेचबिखनजस्ता विषयलाई चित्रण गरिएको छ । द्वन्द्व प्रधान दृश्यहरूको अत्यधिक प्रयोग गरिएको यो चलचित्रलाई दिव्य सुवेदीले छायांकन गरेका हुन् भने श्री श्रेष्ठ चलचित्रका द्वन्द्व निर्देशक हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
कमेडी चर्चामा सुमन
सुमनको हास्य चेत तथा चोटिलो प्रहारलाई दर्शकहरूले मन पराएका छन् । एउटै विषयवस्तुमा धेरै कुरा अटाउन सक्ने उनको खुबीको चौतर्फी प्रशंसा भएको छ । गत मंगलबारको कार्यक्रममा उनले जग्गा दलालहरूका बारेमा चोटिलो व्यङ्य प्रहार गरेका थिए । पुरा पढ्नुहोस्
अभिनेता पुष्प खड्काले जन्मथलो कैलालीस्थित सहारा घरलाई नगद ५० हजार रुपैयाँ तथा खाद्यान्न सहयोग गरेका छन् । मेलाबाट पाएको पारिश्रमिकको केही प्रतिशत सहारा घरलाई सहयोग गरेको पुष्पले बताए । पुष्पले हालैमात्र चलचित्र ‘चालबाज’ को छायांकन सम्पन्न गरेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
दक्षिण कोरियाली अटो कम्पनी हुन्डाई र एपमा आधारित ट्याक्सी सेवा कम्पनी उबरले उड्ने कार बनाउनका लागि साझेदारीको घोषणा गरेका छन् । अमेरिकाको लस भेगासमा भएको कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक शो (सीईएस)– २०२० मा यी दुई कम्पनीले एयरक्राफ्टको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । पुरा पढ्नुहोस्
एयरपोर्ट चेकिङमा प्रहरीसँग भनाभन भएपछि गायिका आस्था राउत विवादमा तानिएकी छन् । प्रहरीले आस्थाका आमाबाबुले प्रहरी कार्यालयमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे उनलाई नेपाल छिर्नासाथ नपक्रिने बताएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
गायिका आस्था राउत प्रकरणमा हिजोसम्म फ्रन्ट–फुटमा आएर लङ–अनतिर छक्का हान्न खोजिरहेको प्रहरीले अब अचानक ब्याक–फुटमा आएर सट खेल्ने संकेत देखिएको छ । त्यो सट डिफेन्सिभ हुन्छ कि हुक वा पुल हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ ! पुरा पढ्नुहोस्
अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा साख्य दाजुभाइ–दिदीबहिनी
अमेरिकी टेनिस खेलाडी भेनस बिलियम र सेरेना बिलियम दिदी–बहिनीका रूपमा घरमा जति मिलेर बस्छन् अन्तर्राष्ट्रिय टेनिस कोर्टमा उनीहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बुबा रिचर्ड बिलियमको प्रशिक्षणमा टेनिस कोर्टमा उत्रिएका भेनस र सेरेनाबीच सन् १९९८ देखि अहिलेसम्म ३० वटा प्रोफेसनल प्रतियोगितामा आमनेसामने भइसकेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
प्रियंका तथा उनका चार जना साथीहरू एउटा मदिराको प्रायोजनमा रमाइलो गर्न त्यता गएको प्रियंकाले नै इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेका तस्बिरहरूले प्रमाणित गरिदियो । अनुमान के लगाइएको छ भने ती पाँच जना सुन्दरीका ग्ल्यामरस तस्बिरहरूलाई उक्त मदिराले आफ्नो प्रचार सामग्री (क्यालेन्डर) मै प्रकाशित गर्ने सम्भावना छ । पुरा पढ्नुहोस्
दि कर्माको साना साना सपना
नेपाली कथानक चलचित्र ‘दि कर्मा’को ‘साना साना सपना’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । यहि माघ १७ गतेबाट अल नेपाल प्रदर्शनको प्रचारमा रहेको चलचित्रको सार्वजनिक गीतमा केतन क्षेत्रीको स्वर, मानस विक्रम थापा र अंकितबाबु अधिकारीको संगीत तथा मानसको शब्द सुन्न सकिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
एउटा शीर्षक राखेर अर्कै समाचार बनाउने र मान्छेको चरित्र हत्या गर्नेहरूको रोजिरोटी बन्द हुन्छ । यो राम्रो कुरा हो, तर सरकारका गलत कामहरूको व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुतिले खबरदारी गर्नसमेत पो लाग्ने हो कि ? तर, सामाजिक सञ्जाललाई नियमनचाहिँ गर्नैपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्